Sharing For All: Zawgyi-One and Unicode
Zawgyi-One and Unicode
Zawgyi-One ကို Install လုပ်နည်း
Zawgyi-One-20060620 ကို Install လုပ်လိုက်ပါ.. Install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Keyboard အတွက် 32 Bits ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာရှိတဲ့ zfk-eg-wc2 ကို Install လုပ်ပါ။ဒါဆိုရင်32BitsUsersများအတွက်မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာZawgyi-Oneဖောင့်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြု လို့ရ သွားပြီဖြစ်ပါတယ်..
32 Bits အတွက် Install လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ 64 Bits User များအတွက် Zawgyi-One ဖောင့်ကို အသုံးပြုလို့ရအောင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်..တစ်ချို့က ဒီအဆင့်လေး
ကိုမသိတဲ့ အတွက် Zawgyi-One ကိုသုံးလို့မရတာတွေဖြစ်တက်ပါတယ်..ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ ဖိုဒါလေးထဲက 32Bits အတွက် Install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ 64 Bits ဆိုတဲ့ Folder လေးထဲကိုသွားလိုက်ပါ..ပြီးရင်အဲ့
ဒီဖိုဒါလေးထဲက install_me ဆိုတာလေးကို Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင်မိမိတို့ ကွန်ပျူတာကို restart ချပေးလိုက်ယုံပါပဲ..ဒါဆိုရင် 64 Bits မှာ Zawgyi-One ကိုအသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်..
Zawgyi and Unicode
နောက်တစ်ခုကတော့UnicodeရောZawgyi-OneရောInstall လုပ်ပြီးသုံးချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေ မယ့်နည်းလမ်းလေးပါ..။အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Zawgyi-One Font ကို Install လုပ်ပြီးပြီ
ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Unicode ကို မိမိတို့စက်မှာသွင်းဖို့အတွက် Unicode Font တွေကို ဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ..Unicode အတွက် ဖောင့်တွေကိုဒေါင်းလော့ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ အထဲမှာပါတဲ့ mm3 , winuniiw , Yunghkio , yunghkio_pop_april_22_ship စတဲ့ ဖောင့်တွေအကုန်လုံးကို Install လုပ်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စက်မှာ Zawgyi-One ရော Unicode ရော နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်လို့ရသွားပါပြီ.။နောက်ထပ် Unicode လက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှ KeyMagic လေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က Zawgyi-One ကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် ကီးဘုတ်က Shift နဲ့ Ctrl ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းသုံးနိုင်သလို Unicode လက်ကွက်ကိုသုံးမယ် ဆိုရင်လဲ Keyboard မှ Ctrl + Shift + Z ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်း သုံးလို့ရသွားပါပြီ..။ဒါကတော့ လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ Zawgyi-One နဲ့ Unicodeနှစ်မျိုးလုံးကိုမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျုတာမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသုံးပြုနိုင် ဖို့အတွက်ကျွန်တော် သိသလောက် ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေပေးခြင်းသား ဖြစ်ပါတယ်.. အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ..ခင်ဗျာ..
Posted by Coralchitthu at 12:43 AM
Game Booster 3.0 BETA Latest Version
Fire fox ကို hack ခြင်းဖြင် speed မြှင့်တင်နိုင်
Laptop အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဦးသန့် နှင့် EQ